I-Gmail ye-iOS ihlaziywa ngokwenza ngokutsha ujongano lwayo kunye nokudibanisa imisebenzi emitsha | IPhone iindaba
Las Izicelo zokuvelisa mhlawumbi zizicelo esizisebenzisa kakhulu kumhla wethu, Kwaye akufuneki silibale ukuba izixhobo eziziimobhayili zazalelwa ukulungiselela usuku nosuku, kwaye phakathi kwezinye izinto ukulungiselela umsebenzi wethu.
Kwaye into esisiseko kubomi bethu, i-imeyile, kum yenye yezona zinto zilungileyo zetekhnoloji. I-imeyile apho kukho iinkonzo zewebhu ezingapheliyo, kwaye ngokucacileyo inani elikhulu lezicelo ezisinceda ukulawula ii-imeyile zethu. Namhlanje sikuzisa uhlaziyo lwenkqubo ye-imeyile eyaziwayo: i-Gmail. Inkqubo ye I-Gmail isandula ukuhlaziywa ngokuhlaziya kunye neempawu ezintsha apho sifumana ifayile ye- ukubanakho ukucima ukuthunyelwa kwee-imeyile ...
Njengoko sisitsho, inoveli ephambili yale app intsha ye-Gmail ye-iOS yi ukubuyela umva kokuthunyelwa kweposi ngaphambi kokuba zithunyelwe, Into efunwa kakhulu ngabasebenzisi ngakumbi kuba basebenzise ukhetho kuhlobo lwewebhu losetyenziso. Ukongeza koku, sine Uyilo kwakhona lwesinxibelelanisi sesicelo, kunye ne-injini yokukhangela entsha onokufumana kuyo nayiphi na i-imeyile esinayo kwi-Gmail yethu.
Yile nto basixelela yona kwi uhlaziyo log Inguqulelo entsha ye-Gmail ye-iOS, uhlaziyo lwe-5.0.3 ye-app:
I-Gmail uyayazi kwaye uyayithanda, ngoku inenkangeleko entsha kunye nephuculweyo, utshintsho olungenampazamo, kunye nezinye zeempawu ezifunwa ngabasebenzisi kakhulu. Kwaye isebenza ngokukhawuleza kakhulu.
- Rhoxisa ukuthunyelwa: thintela iimpazamo ezihlazo
- search-Fumana izinto ngokukhawuleza ngeziphumo kwangoko kunye neengcebiso zopelo
- Swayipha imiyalezo ukuyigcina okanye ukuyicima-Khawuleza ucime ibhokisi yakho engenayo
Uyazi, ngolu hlaziyo lutsha kwi-Gmail ye-iOS, iapp eyaziwayo yomphathi wemeyile kaGoogle iba nomdla ngakumbi, kucacile ukuba uneakhawunti ye-Gmail (nangona ungayisebenzisa nezinye ii-imeyile). Inkqubo simahla y Jikelele, ukuze uyisebenzise ngayo nayiphi na izixhobo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Gmail ye-iOS ihlaziywa ngokwenza ngokutsha ujongano lwayo kunye nokongeza imisebenzi emitsha